500X1000mm Taxanaha Dhacdada Gudaha Shaashadda LED Screen
Nooca alaabta: P3.91
Cabir: 500 * 1000mm
P3.91 Soosaarka Dhacdada Gudaha Gudaha Shaashadda LED-ka P3.91 Soosaarka Dhacdooyinka Gudaha P3.91 Soosaarka Dhacdada Gudaha Gudaha Shaashadda LED
Xalka gudaha iyo bannaanka la adeegsan karo
-Ka Faa'ideysiga Weyn
-Taageer Codsiyada Badan
-Better ROI (ku soo noqoshada maalgashiga)
-Culeyska saxanka oo keliya 13Kg
-In ka badan 20% Ka fudud alaabooyinka caadiga ah
-Nin nin rakibid
- Sanduuqa awoodda adeegga degdegga ah
MUUQAALADA Laydhka Kiraysiga ee Adeegsiga Xirfadaha
Shaashadda 'LED kirada' ee taribuunka iyo shirarka waa leyrarka LED-ka oo awood u leh inay soo saaraan sawirro iyo fiidiyowyo xallinta sare leh oo leh iftiin ka sarreeya aaladaha kale, sida kormeerayaasha dhaqanka iyo mashruuc-bixiyeyaasha oo aan u oggolaan inay si sax ah u arkaan waxa ku jira, iyadoo ay ugu wacan tahay iftiin la'aanta ama xanaaqa. milicsiga ay soo bandhigaan. Sidan oo kale, dhalaal aan la loodin karin ayaa la damaanad qaaday.
Shaashadaha kirada ayaa ku habboon kuwa xirfadlayaasha ah ee ka qayb galaya shirarka ama bandhigyada, kuwaas oo u baahan fudud in la soo ururiyo, shaashadaha miisaanka culus oo sidaa darteed si fudud looga qaadi karo hal meel oo kale.
Isku-darka isku-duwidda degdegga ah iyo kala-goynta nidaamyada waxay xaqiijineysaa geedi socod rakibis ka sahlan oo ka jaban marka loo eego nidaamyada kale ee shaashadda LED-ka.
XAGGEE LAGA RAGAYO SHARCIYADA LAYDKA KIRA?
Shaashadda 'LED kirada' waxay siisaa faa'iidooyin kala duwan. Markii hore, darbiyada fiidiyowga iyo soosaarayaasha ayaa loo adeegsaday ujeedkan. Hadda, oo leh shaashado LED kiro ah, waxaa suurtagal ah in la helo shaashado waaweyn oo dhalaalaya, qabashada dhacdooyinka kaqeybgalayaasha 'dareenka.
Maaddaama shaashadaha 'LED' ay yihiin wax soo saar cusub, qiimaha kirada ayaa u muuqda mid sarreeya, sidaas darteed, shirkado badan oo kiro ah ayaa go'aansaday inay ka faa'iideystaan ​​baahida sare oo ay maalgashadaan wax badan iyo in ka badan badeecada noocan ah.
ISTICMAALKA IYO CODSIYADA SHARCIYADA Laydhka KIRADA
Shaashadan waxaa loo sameeyay si xirfadleyda ku soo bandhigaya wax soo saarkooda iyo adeegyadooda carwooyinka iyo congress-yada ay ku soo wada bandhigi karaan dhammaan wax soo saarkooda qaab ballaaran iyo qaab la yaab leh. Alaab-qeybiyeyaasha qalabka maqalka ee abaabula riwaayadaha, bandhigyada ama dhacdooyinka xayeysiinta sidoo kale waa kuwa iibsada shaashadda LED-ka ee kirada ah, si ay uga kireystaan ​​dhinacyada saddexaad.
Shaashadda LED-ka ee kirada ayaa ah ikhtiyaarka ugu fiican ee lagu istaagi karo dhacdo kasta, maaddaama ay suurtagal tahay in la habeeyo oo wax laga beddelo cabbirka shaashadda. Sidaa darteed, waa beddel aad u fara badan oo loogu talagalay xirfadleyda qaybta maqalka.
Nidaamkeeda isku-duwidda qaabdhismeedka iyo elektaroonigga caqliga ayaa kuu oggolaanaya inaad la jaanqaado cabirka si waafaqsan. Kaliya waxaad u baahan doontaa inaad soo uruuriso looxyada LED-ka oo u dhigma cabirka loo baahan yahay. Tani waxay suurtogal ka dhigeysaa in loo qeybiyo shaashad weyn oo kiro ah dhowr ka yar.
Faa'iido kale oo muhiim ah ayaa ah xallinta wanaagsan iyo tayada muuqaalka ee shaashadaha kirada ee la bixiyo, taas oo u fiican sida ugu wanaagsan ee si joogto ah loogu rakibay shaashadaha LED-ka ay bixiyaan. Waad ku mahadsan tahay sifooyinkooda farsamo ee sare, shaashadaha LED-kirada waxay bixiyaan muuqaal muuqaal ah oo fiidiyoow ah, xitaa dibedda iyo qorraxda oo buuxda.
Xulashada Pixel Pitch
Shayga Taxanaha FV Taxanaha FV Taxanaha FV
Sawirka Pixe 3.91mm 3.91mm 4.81mm
Xirnaanshaha hoggaanka SMD2121 SMD1921 SMD1921
Habka Sawirka 1/16 Sawir 1/16 Sawir 1/13 Sawirka
Iftiin (Nits / ㎡) 1100 Nits 4500 Nits 4500 Nits
Ilaalinta IP IP43 IP65 IP65
Hababka Dayactirka Gawaarida Adeegga ah
Cabbirka Module (W * H) 250mm * 250mm
Tirada Golaha Wasiirada (W * H * D) 500mm * 500mm / 500mm * 1000mm
Heerkulka midabka 9500K ± 500 （La hagaajin karo）
Miisaanka Cawl 14-16Bit
Miisaanka Golaha Wasiirada 7KG / 12KG
Celcelis ahaan Isticmaalka Awoodda 350-400Watt / ㎡
Isticmaalka Awoodda Ugu Badan 800Watt / ㎡
Heerkulka Hawlgalka -20 ° C ilaa 50 ° C
Xaglo qalloocan 15 Darajo
P3.91 Muuqaalka Muuqaalka Dhacdooyinka Gudaha ee Gudaha
P2.97 Dhacdada Gudaha Gudaha Kireysiga Muuqaalka Muuqaalka LED
500x1000mm Wall Display Gudaha Gudaha kirada ah